Myanmar Companies Law APK 1.2 Download for Android – Download Myanmar Companies Law APK Latest Version - APKFab.com
1.2 by Thein
Android App can read Myanmar Companies Law
Myanmar Companies Law Screenshots
Myanmar Companies Law 1.2 Description
Myanmar Companies Law (Package Name: com.ebzits.myanmarcompanieslaw) is developed by Thein and the latest version of Myanmar Companies Law 1.2 was updated on August 9, 2020. Myanmar Companies Law is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Myanmar Companies Law and find 13 alternative apps to Myanmar Companies Law on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
မွနျမာနိုငျငံ ကုမ်ပဏီဥပဒေ အသဈမှာ လူတဈဦးတညျးနဲ့လညျး ကုမ်ပဏီဖှငျ့ပွီး လုပျကိုငျဆောငျရှကျလာနိုငျပါပွီ။ Android App အနဖွေငျ့ အလှယျတကူ Offline ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။ ယခု ဥပဒကေို official အင်ျဂလိပျလို ထှကျရှိလာပါကလညျး update လုပျပေးသှားဖို့ရှိပါတယျ။ စာလုံး Font ကို Win အုပျစုနဲ့ Zawgyi တှဲဖကျ အသုံးပွုထားတာကို တှရေ့မှာပါ။ App Size ကတော့4MB ကြျောကြျော ရှိတဲ့အတှကျ နညျးနညျးကွီးနပေါတယျ။ နောကျပိုငျး update တှမှော Size သေးလာအောငျ လုပျပေးသှားပါမယျ။
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီဥပဒေ အသစ်မှာ လူတစ်ဦးတည်းနဲ့လည်း ကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွှက်လာနိုင်ပါပြီ။ Android App အနေဖြင့် အလွယ်တကူ Offline ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ယခု ဥပဒေကို official အင်္ဂလိပ်လို ထွက်ရှိလာပါကလည်း update လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ စာလုံး Font ကို Win အုပ်စုနဲ့ Zawgyi တွဲဖက် အသုံးပြုထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ App Size ကတော့4MB ကျော်ကျော် ရှိတဲ့အတွက် နည်းနည်းကြီးနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း update တွေမှာ Size သေးလာအောင် လုပ်ပေးသွားပါမယ်။
Myanmar Companies Law 1.2 Update
Fixed for Android Q or 10
Myanmar Companies Law Features
Alternatives to Myanmar Companies Law More
English Thaddar App to learn and practice quizzes for English grammar for Myanmar 9.4 35
Myanmar Clipboard Dictionary English-Myanmar (Zawgyi) Dictionary with ease of access 9.2 361
Holy Quran Burmese This isaHoly Quran app in Burmese (Myanmar) Language. 9.4 9
Falam Bible The Holy Bible in Falam (Chin) 9.1 42
Myanmar Law You can read the collections of useful law in Myanmar 9.2 128
Routing Map Save any locations on the map and draw routing 9.5 245
Weather Myanmar (မိုးလဝေသ ခနျ့မှနျးခကျြ) Weather forecasts5to3hours You can view places on the map 8.8 30
Safe Driving ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း သိမှတ်ဖွယ်ရာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ဖြေဆိုကြည့်ပါ။ 9.1 32